अब मलार्इ भन्नुस्, कसको जनचेतना जगाऔं ? « Anumodan National Daily
अब मलार्इ भन्नुस्, कसको जनचेतना जगाऔं ?
By : - शेरबहादुर बस्नेत
म कहिले काँही विखलबन्दमा पर्छु । मैले “हाम्रो समाज राम्रो समाज बनाउन हामी सवै ऐक्यबद्ध भएर लाग्नुपर्छ र यसका लागि सबैले राम्रो थिती, प्रकृया, चलन, संस्कार र अभ्यासको शुरुवात र पालना गर्नुपर्छ” भन्ने मान्यतालार्ई अंगिकार गर्दै आए ।
यो कसरी हुन्छ त ? यो जनचेतनाको बृद्धिले हुन्छ । यो जनचेतना जगाउने उपाय के हो त ? यसको उपाय सामाजिक संस्था पनि हुन सक्छन् । नेपालको कानुनले सामाजिक संस्थामार्फत काम गर्न गैरसरकारी संस्थालाई अनुमति दिएको छ भनेर त्यस्तो गैरसरकारी संस्थाको काममा लागेको पनि २५ वर्ष भन्दा बढि भइसकेको रहेछ । संयोग बस म आवद्ध संस्थाको नाम पनि जनचेतना तथा युवा जागरण मञ्च भन्ने नै परेछ ।
यो २५ वर्षमा मैले बारम्बार सुनेको एउटा शब्द हो– जनचेतना । समाजलाई अग्रगमनमा लैजान र समाज विकासका अवरोधलाई हटाउन के गर्नु पर्छ ? भन्ने सन्दर्भमा अचुक औषधी सबैले प्रस्तावित गर्ने गरेको त्यो हो– नागरिकको चेतना ।
मैले बुझ्न नसकेको, यो समाज विकासको अचुक औषधी, जुन धेरैजसो नेता र कर्मचारीतन्त्रले हामी विकासेहरूलाई दिने सुझाव पनि जनचेतना नै हो ।
आज एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुँदा फेरी मैले माननीय सांसद र मन्त्रीज्यूबाट यो जनचेतनाको खुराक पटक पटक हामी विकासे कार्यकर्ताहरुलाई सुझावका रुपमा प्राप्त भएपछि यो के हो ? भनेर चर्चाका लागि केही लेख्ने मुर्ख प्रयास गरेको छु ।
यदि जनचेतना भन्ने शब्द अंग्रेजीको Awareness हो भने यसको अर्थ अंग्रेजीमा knowledge or perception ofasituation or fact. हुने रहेछ । अर्थात् नेपालीमा यसको अर्थ जानकारी अथवा बोध भनिदो रहेछ ।
कार्यक्रममा हामीले चर्चा गरिरहेका थियौं– महिलामाथि हिंसा हुन्छ । सुरक्षित मातृत्वको वातावरण छैन । समाजमा गरीवी छ । हाम्रो प्रदेश, स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा राम्रो छैन आदि इत्यादि । नेताज्यूहरूले होलसेलमा भनिदिनु भयो– ती पीडामा ा पर्नेहरूमा जनचेतना छैन । जनचेतना जगाउनु पर्यो ।
जनचेतना भनेको बोध हुनु र जानकारी हुनु हो भने के एक महिलालाई मलाई पीडा भएको छ भन्ने बोध हुन्छ की हुन्न होला ? संतान जन्माउन योग्य बन्नका लागि महिनावारी हुँदा घरभन्दा पर गोठमा पसारो पर्दा यसको बोध उनलाई हुन्छ की हुन्न होला ? मैलै जन्माएका छोराछोरीलाई स्याहार संभार गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी हुन्छ की हुन्न होला ? दलित भनेर उसले छोएको पानी नखाँदा उसलाई हिनताको बोध हुन्छ की हुन्न होला ?
आफुलाई रहर नहुँदा नहुँदै पनि पाँच जना छोरीपछि पनि छोरा जन्माउन बाध्य महिलालाई सुत्केरी ब्यथाको बोध हुन्छ की हुन्न होला ? कतै पनि बास बस्ने ठाउँ नपाएर खोलाको किनारमा बस्न बाध्य एकजना गरिबलाई खोलाले साना लालाबाला बगाउँदा उसलाई बोध हुन्छ की हुन्न होला ? सीप र रोजगारीको अभावले कमाई गर्न नसकेर परिवार सवै भोकै बस्दा भोको अवस्थाको बोध हुन्छ की हुन्न होला ? आदि इत्यादि ।
मैले जिम्मा पाएको अथवा सुझाव पाएको पनि यिनैलाई जनचेतना जगाउनु भन्ने हो । अब मलाई भन्नुस् म कसलाई जनचेतना जगाऊँ ?
सुत्केरी हुँदा चाहिने आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा नभएका कारण घरमै सुत्केर भएर आँसी (हसिया) ले नवजात शिशुको नाल काट्न बाध्य महिलालाई जनचेतना जगाऊँ कि त्यो बनाउने जिम्मा लिएको निकाय र सरकारको चेतना जगाऊँ ? महिनावारी हुनु अपराध हो झैं ठान्ने स्कुल कलेजका प्रोफेसर, शिक्षक, नेता, कर्मचारी र पढेलेखेका र समाजका अगुवा भनाउँदालाई जनचेतना जगाऊँ कि ति तिरस्कृत गोठमा बस्न बाध्य निरिह महिलालाई अथवा छोएकै कारणले अछुत मानिने कथित दलितको जनचेतना जगाऊँ ?
नागरिकको करबाट किनिने आधारभूत स्वास्थ्य सुविधामा भ्रष्टाचार गर्ने ती सरकारी अधिकारीहरूको जनचेतना जगाऊँ कि निमोनियाले छटपटिदा एक्सरेसम्मको सेवा पनि नपाउने त्यो अभागी विरामीका लागि जनचेतना जगाऊँ ?
नागरिकको करबाट अकुत सम्पत्ति जोड्ने ति भ्रष्टाचारीको जनचेतना जगाऊँ कि भोको पेट कर तिर्ने ति धोती र टोपी फाटेका बेसहारा निरिह नागरिकको जनचेतना जगाऊँ ?
म कसको र कसका लागि जनचेतना जगाऊँ माननीय ज्युहरू ? म विखलबन्धमा परेको छु ।
(लेखक बस्नेत, शिक्षा अधिकार अनुगमन समुह, सुदूपश्चिम प्रदेश समितिका संयोजक हुन्)
सम्पादकीय : संविधानवाद तथा लोकतन्त्रको पक्षमा जनबहस आवश्यक
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद (प्रतिनिधि सभा) विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा
संकटको वेला काँग्रेसको अभिभारा
सुनीलकुमार भण्डारीपूर्व केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काँग्रेस अहिले मुलुकको राजनीतिक अवस्था निकै तरल छ, अनिश्चित छ